अनमोलको बलिउड डेव्यु, बिक्ला स्टारडम ? « Ramailo छ
अनमोलको बलिउड डेव्यु, बिक्ला स्टारडम ?
प्रकाशित मिति : Jun 6, 2018
लगालग दुई नेपाली फिल्म खेल्ने सम्झौता गरेका युवा स्टार अनमोल केसीले बलिउड फिल्म पनि खेल्ने भएका छन् । भारतीय दैनिक पत्रिका हमरा महानगरले अनमोलको बलिउड डेब्यु बारे समाचार नै छापेको छ । जुन समाचारको स्क्रिन सट आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेर बलिउड फिल्म खेल्ने अनमोलले पुष्टि गरेका छन् ।
‘अनमोल सुप्रसिद्द म्युजिक कम्पनि वल्र्डवाइड रेकर्ड्स लिमिटेडसँग नयाँ भेन्चरका लागि जोडिएका छन् । जुन कम्पनि अब एउटा हिन्दी फिल्म निर्माण गर्दैछ । नाम तय नभैसकेको सिनेमाको अफिसियल घोषणा छिट्टै हुनेछ । संगीतको दुनियाँमा छुट्टै आयाम स्थापित गरेको यस कम्पनिले अब सिनेमा निर्माणमा पनि हात हालेको छ । म्युजिक कम्पनिले गरेको यो नयाँ पहल हो, हमरा महानगर लेख्छ, हमरा महानगरमा उल्लेख छ ।
अनमोल केसीले डेब्यु गर्ने हिन्दी फिल्मलाई नेपाल, भारतसँगै विश्वका ७४ वटा देशमा रिलिज गरिने बताइन्छ । कम्पनिका ओनर रत्नाकर कुमार भन्छन ‘मलाई एकदमै खुसि लागिरहेको छ की, हामीले नेपाली कलाकारलाई पनि कम्पनिसँग जोड्न पाएका छौँ । यो नयाँ भेन्चरका लेखक र निर्देशक मनोज नारायण र राधेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
अनमोल यतिबेला होम प्रोडक्सनको फिल्म क्याप्टेन छायाँकनमा व्यस्त छन् । यस लगत्तै उनी झरना थापाको ए मेरो हजुर ३ र मिलन चाम्सको ब्याचल बन्टीमा व्यस्त हुनेछन् ।